फाइभजीको तरंग स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ? यस्तो छ अनुसन्धानको नतिजा - Technology Khabar
» फाइभजीको तरंग स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ? यस्तो छ अनुसन्धानको नतिजा
कतिपय अनुसन्धानहरुमा फाइभजी प्रविधि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएको बताइन्छ। गत वर्ष कोरोना महामारीका बेला यसलाई फैलाउनमा फाइभजी का टावरहरुको हात रहेको अफवाह फैलिएको थियो।
तर हालै अस्ट्रेलियामा गरिएको एक अनुसन्धानले फाइभजी मा प्रयोग गरिएको रेडियो तरंगका बारेमा धेरै कुराहरुको खुलासा गरेको छ।
फाइभजी प्रविधिका बारेमा मानिसहरुको दिमागमा विभिन्न प्रकारका विचारहरु आएका छन्। कोही यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने बताउँछन्। गत वर्ष पश्चिमी देशहरुमा फैलिएको कोरोना फाइभजी को रेडियो तरंगका भएको हल्ला फैलिएको थियो।
यो अफवाह सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि कतिपय ठाउँमा फाइभजी का टावरमा आगजनी गरिएको थियो।
तर हालै दुई वैज्ञानिकहरुले फाइभजी प्रविधिमा प्रयोग हुने रेडियो तरंगले स्वास्थ्यमा कुनै नकारात्मक असर नपारेको प्रमाण भेटेका छन्।
के फाइभजी प्रविधिले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्छ?
अष्टेरेलियन रेडियशन प्रोटेक्शन एन्ड न्युक्लियर सेफ्टी एजेन्सीले स्वाइनबर्न युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीसँग मिलेर हालै एउटा समीक्षा गरेको छ।
६ गिगाहर्जभन्दा माथि कम लेभलको रेडियो तरंगमा गरिएको १३८ वटा अनुसन्धानलाई यस विषयमा गरिएको विश्वकै पहिलो समीक्षा मानिएको छ।
यस समीक्षामा १०७ व्यवहारिक अनुसन्धानमार्फत् मूल्यांकन गरिएको छ जसमा फाइभजी रेडियो तरंगमाथि विभिन्न जैविक प्रभावका बारेम परीक्षण गरिएको छ।
एआरपीएएनएसएका सहायक निर्देशक डा. क्रिपिडिसका अनुसार विश्लेषणको नतिजामा फाइभजी नेटवर्कमा प्रयोग हुने रेडियो तरंगहरुले मानवीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउने कुनै प्रमाण भेटिएको छैन।
उनले यीमध्ये जैविक प्रभावको बारेमा गरिएको अध्ययनमा समीक्षाका लागि कम गुणस्तरको तरिकाहरुको प्रयोग गरिएको बताए।
अनुसन्धानकर्ताहरुले फाइभजी अनुगमनका लागि भविष्यमा काम हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रायोगिक अनुसन्धान हुनुपर्ने सुझाएका पनि जानकारी दिए। समीक्षाको नतिजाले यस नयाँ प्रविधिले मानवीय स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपार्ने आशा जगाएको छ।
फाइभजी सुरक्षाका हिसाबले सकारात्मक नै भए पनि उल्लेख्य संख्यामा मानिसहरु यसप्रति अझै शंकाको दृष्टिले हेरिरहेका छन्। तर फाइभजीका कारण स्वास्थ्य समस्या र कोरोना भाइरसबीच कुनै प्रकारको सम्बन्ध देखाउन सकिँदैन।
वैज्ञानिकहरुको हालको समीक्षाको नतिजा जर्नल अफ एक्सपोजर साइन्स एन्ड इन्भाइरोन्मेन्टल इपिडेमियोलोजीमा प्रकाशित गरिएको छ।